Indlu yasebukhosini yeVintage entliziyweni yeSlovenia
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIvanka
Ifulethi elikuMbindi weSlovenia lihonjiswe kwisitayile sakudala saseSlovenia "sasebukhosini". Le ndlu yayikhe yaba yindawo yokuzingela eyayiyeyenqaba ekufutshane. Amagumbi avulekile kwaye akunika imvakalelo ethuthuzelayo kunye nokwamkela.
Indlu enkulu eyi-120 m2 ikwindawo ekhuselekileyo, eneendawo zokupaka iimoto ezi-3. Ifakwe kumbindi weSlovenia kufutshane nesikhululo seenqwelomoya kunye nesixeko esikhulu, yonke indawo yokufikela inokufikelelwa ngokulula ukusuka apha.
Ungajonga umboniso wevidiyo kwi-Youtube ngokukhangela "Ajda apartment airbnb"
ihonjiswe kwisitayile sakudala, icocekile kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo. Ine: amagumbi okulala ama-3, i-terrace, i-air conditioning, i-TV yesathelayithi eneenkqubo ezingaphezu kwama-300, unomathotholo, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi.
linelanga, likhululekile, lixhotyiswe ngazo zonke izinto eziyimfuneko. Ubungakanani beTV yi-80 cm kunye noqhagamshelo lwentambo. Sikwanayo ne-Wi-Fi yeekhompyuter kunye neefowuni, kunye nokuphuma kwi-terrace, encinci.
ixhotyiswe ngokupheleleyo; inazo zonke izinto, i-oveni, imicrowave, isifudumezi samanzi, umatshini wokuhlamba izitya kunye neetawuli zasekhitshini. Ekhitshini kukho iindidi ezininzi zeti, ikofu, iswekile, ioyile, iviniga, iziqholo, isicoci sokuhlamba izitya.
Onke amagumbi okulala ama-3 akhanyayo kwaye anelanga:
-Igumbi lokulala elinebhedi enkulu yabantu aba-2 kunye negumbi elikufutshane nebhedi yomntwana kunye negumbi elongezelelweyo,
-Igumbi lokulala elinebhedi enkulukazi enegumbi lokudlala eliyimfihlo labantwana,
-Igumbi lokulala elincinci elinye elinendawo yokufunda / yedesika yomsebenzi,
ikwindawo ekufutshane nawo onke amagumbi okulala, anesepha engamanzi kunye neetawuli. Umatshini wokuhlamba kunye nesomisi seenwele zibandakanyiwe.
I-AC iyafumaneka. Ubumelwane bukhuselekile kwaye zonke izinto zakho ezisendlini ziya kukhuseleka. Unokuchitha ixesha ngaphandle nakwindlu yasehlotyeni yasegadini.
Le ndlu ikwilali ekumbindi weSlovenia kwindawo ekhuseleke kakhulu. Zonke iindawo zokundwendwela zinokuqhutywa ukusuka apha ngaphantsi kweeyure ezi-2 kwaye ukuqeshwa kwemoto kunokwenziwa kanye kwisikhululo seenqwelomoya.
Njengomamkeli-zindwendwe ndiyafumaneka kuyo yonke imibuzo yakho.